China 7kw EV chaja USB chaja ụlọ na nrụpụta TUV Ce RoHS | Tech Joint
7kw EV chaja chaja ụlọ na TUV Ce RoHS
N'ịbụ ndị otu IT mepere emepe na ọkachamara pụrụ iche na-akwado, anyị nwere ike ịnye nkwado teknụzụ na ọrụ ịre ahịa & mgbe ịre ahịa maka nzipu ngwa ngwa maka China IEC 62196-2 ọdụ ụgbọ ala eletriki ụgbọ ala nwere ụdị plọg 7kw, na-anabata òtù ndị nwere mmasị imekọ ihe ọnụ. anyị na anyị, anyị na -elepụ anya n'ihu iji nweta ohere nke iso ndị otu na -arụ ọrụ n'ụwa niile na -arụkọ ọrụ maka uto ọnụ na ihe ịga nke ọma.
Anyị dabere na ike teknụzụ siri ike ma na -emepụta teknụzụ ọgbara ọhụrụ iji mezuo ọchịchọ nke Quots maka China 7kw Type 1 Type 2 Fast Charging Cars, "Gbanwee ka mma!" bụ isiokwu anyị, nke pụtara "ụwa ka mma dị n'ihu anyị, yabụ ka anyị kporie ndụ!" Mgbanwe ka mma! Ị dịla njikere?
Nkwupụta maka onye nrụpụta cha cha ụlọ ọrụ EV, igbe igbe Type2 Type1 EV, na ụkpụrụ nke mmeri, anyị nwere olileanya inyere gị aka ị nweta uru karịa n'ahịa. Ohere abụghị ka ejide ya, mana ka e kee ya. A nabatara ụlọ ọrụ azụmaahịa ọ bụla ma ọ bụ ndị na -ekesa si mba ọ bụla.
Nke gara aga: IEC 62196-2 11kw EV Recharge Stations EV Charger nwere ụdị ọpụpụ 2
Osote: Ụlọ ọrụ ọkachamara maka China SAE J1772 Ọkwa 2 switchable Reserve EV chaja
Ụgbọ ala Nchaji
Ọkwọ ụgbọ ala eletrik
Ihe nchaji ụgbọ ala eletrik
Ebe nkwụnye ụgbọ ala eletrik
Igwe chaja eletriki
Ụlọ Nchaji eletrik
Ụlọ Nchaji Ev
Wallbox Ụdị 2 16a 7kw One adọ EV Nchaji Po ...
Nlụpụta US ọkọlọtọ chaja Unit maka Ele ...